Ku dar xoogaa shaqeyn dheeri ah Firefox wixii ku saabsan: config | Laga soo bilaabo Linux
Akhrinta RSS-kayga waxaan ka helayaa maqaal xiiso leh Genbeta halkaas oo ay naga tusayaan 10 tab ama farsamo oo aan ka hawl galin karno Firefox ka ku saabsan: config. Xaaladdan oo kale waxaan dhigay kuwii ugu xiisaha badnaa:
Tus thumbnails with Ctrl + Tab:
Waxay ahayd wax aad ugu eg waxa aan ku hayno desktop-ka markaan furayaasha isticmaaleyno Alt + Tab. Si aan u dhaqaajino waxaan bedelnaa qiimaha browser.ctrlTab.previews a true.
Muuji / qari badhamada si aad u xidho tabsyada:
Waxaan xirayaa tabyaheyga anigoo riixaya jiirka jiirka, marka uma baahni inaan lahaado badhanno u dhow tabka, ama ugu yaraan dhammaantood. Helitaanka halbeegga browser.tabs.closeButtons iyo bedelida qiyamka waxaan lahaan karnaa qiyamka soo socda:
0 (wuxuu muujinayaa badhanka u dhow kaliya tabka firfircoon).
1 (marka loo eego, waxay muujineysaa badhanka u dhow dhammaantood).
2 (ma muujinayo badhanka tab kasta).
4 (wuxuu ku tusayaa hal badhan meesha hoose ee tabsada).
Ka fogow dib ugu noqoshada furaha dhabarka:
Waxaan horay u aragnay khiyaanadan Laga soo bilaabo Linux, laakiin samaynaya uun soo horjeedka. Haddii aan rabno inaan wax walba iska dhigno waxaan joojin karnaa adoo beddelaya cabbirka browser.backspace_action a 2.
Ku muuji "http: //" dhammaan jihooyinka:
Hagaag, haddii aad rabto inaad ku aragto http: // markale cinwaanka cinwaanka, kaliya waa inaad gelisaa cabirka browser.urlbar.trimURLs en false.
Jooji waqtiga nasashada ka hor intaadan rakibin qalab:
Waqti kasta oo aan dooneyno inaan rakibno wax cusub oo dheeri ah, waxay ina tusinaysaa tirinta tirinta ka hor inta aanan riixin badhanka "Ku rakib" Waxaan tan ku badali karnaa adoo galinaya cabirka security.dialog_enable_delay in 0.
Daar "Badbaadi oo xir" marka aad xireyso Firefox:
Xaqiiqdii markaan ku xirno Firefox tabs furan, waan furi karnaa haddii aan dhigno barta URL-ka about:home oo guji badhanka: Soo celi casharkii hore, ama wax la mid ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad hubiso in Firefox uu keydinayo waxa aan furan nahay, waxaan beddeleynaa cabbirka browser.showQuitWarning a true.
Ku muuji natiijooyinka raadinta tab cusub:
Tan waxaan u beddeleynaa cabbirka browser.search.openintab a true.
Waxaad ku arki kartaa xeelado kale maqaalka asalka ah Genbeta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku dar xoogaa shaqeyn dheeri ah Firefox wixii ku saabsan: config
Wanaagsan, waad ku mahadsan tahay khiyaanooyinka Elav.
Kii aan aadka u jeclaa ayaa ahaa kii ugu horreeyay, aniga waxtar badan ii leh.
Maqaal wanaagsan, waan jeclahay Firefox talooyinkani waa wax fiican! 🙂
Aan ka helinBrooklyn dijo
Ma aanan ogeyn waxa ku saabsan horudhaca. Daaran, hehehe.
Ku jawaab NotFromBrooklyn
Waxaan u geystaa ffmania?
Tilmaamaha ayaa aad u wanaagsan. Hadda, si aad ugudhaqaajiso horudhaca Ctrl + Tab dusha 'Iceweasel'.
Aad u fiican, waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Aad u fiican. Cafi su'aashayda laakiin .. Sideen u gab karaa xayeysiiska google-ka ee barakaysan "Ku rakib Google Chrome" Firefox. salaan
Amni dheeraad ah, ka jooji tixraacyada.
Cinwaankan caanka ah ee sida khaldan loo qoray oo sida caadiga ah loogu diro si caadi ah codsi kasta oo HTTP ah wuxuu siiyaa macluumaad badan oo shaqsiyeed suurtagal ah bogagga internetka. Laakiin waad iska joojin kartaa. Fur tab cusub oo barta cinwaankaaga ku qor "about: config". Waxaad arki doontaa digniin inaad ka taxaddarto waxaad samaynayso. Guji "Waan taxaddari doonaa, waan ballan qaadayaa!" Baarka raadinta, ku qor "garsoore." Waa inaad aragtaa "goobta" "network.http.sendRefererHeader". Laba jeer ku dhufo oo u beddel qiimaha 0:
Xeelado aad u fiican, mahadsanid
Wow, waa tilmaamo aad u fiican. Mahadsanid
Qalabka anti-malware iyo qalabka root-ka ee bilaashka ah